Barcelona Oo Heshiis La Gaadhay Tababarihii Ay Shaqada Ka Caydhisay Ee Ronald Koeman - Laacib
HomeWararka CiyaarahaBarcelona Oo Heshiis La Gaadhay Tababarihii Ay Shaqada Ka Caydhisay Ee Ronald Koeman
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa heshiis la gashay tababarihii ay dhowaanta shaqada ka caydhisay ee Ronald Koeman, kaas oo ay isla qaateen inay burburiyaan heshiiskiisii, isla markaana ay Barca bixiso lacag ka yar intii ku waajibaysay haddii aan la dhamayn khilaafka u dhexeeya.
Barcelona ayaa dhamaadka bishii October shaqada ka eriday Ronald Koeman, waxaana lagu beddelay Xavi Hernandez, taasina waxay keentay inuu sii xoogsaysto khilaaf u dhexeeyey Koeman iyo Joan Laporta.
Kaddib kulankii guul-darrada ee Rayo Valllecano ay1-0 ku garaacday, Barcelona ayaa saqdiii dhexe soo saartay war-saxaafadeed ay shaqada kaga caydhisay Koeman.
Kooxda reer Spain ayaa usbuucyadii ugu dambeeyey waxay ku hawlanayd sidii ay heshiis ula gaadhi lahayd Ronald Koeman, si ay uga baaqsadaan inay bixiyaan 12 milyan oo Euro oo ku waajibay kaddib caydhintiisii.
Heshiiska ay labada dhinac gaadheen ayaa waxa uu dhigayaa in Barcelona ay bixiso 10 milyan oo Euro oo magdhow ay siinayso Koeman, isla markaana laga dhaafay laba milyan oo kale oo uu tababaraha reer Netherlands xaq u lahaa.
Koeman oo Barcelona yimid waqtigii Josep Maria Bartomeu, ayuu Joan Laporta isku dayay inuu xagaagii shaqada ka caydhiyo sannad kaddib markii uu tababarahan loo magacaabay shaqada, hase yeeshee waxay waqti dambe isla qaateen inuu sii wado shaqada.
Hase yeeshee natiijooyinka aadka u liitay ee ay kooxdu ka keenaysay horyaalka LaLiga iyo sidoo kale Champions League ayaa ku qasbay Laporta inuu shaqada ka caydhiyo Koeman.